Uvimba weefayili abaqondisi-mthetho - Fumana a lawyer kwi-France - Abaqondisi-mthetho ka-Us-intanethi!
Uvimba weefayili abaqondisi-mthetho - Fumana a lawyer kwi-France
Ulawulo ka-Attorneys kuyo kuba baninzi abaqondisi-mthetho. Ukwenza yakho uphendlo lula, ezi abaqondisi-mthetho ingaba ezibekwe yi ariya iinkalo zobuchule kwaye indawo kummandla wethu uvimba weefayili
Ufuna ukufumana a lawyer ukuba ikhusele kwenu, hire a umgaqo-nkqubo, bhala i-iphepha okanye balandele yakho ye email.
Ingaba recontact yi-linalo igunya abaqondisi-mthetho kwaye khetha enye ukuba suits ngaba eyona. Kufuneka i-ngqo impendulo Ukwenza yakho uphendlo lula, ezi abaqondisi-mthetho ingaba ezibekwe yi ariya iinkalo zobuchule kwaye indawo kummandla wethu uvimba weefayili. Enkosi okulungileyo ukukhangela nkqubo, Ulawulo ka-abaqondisi-mthetho ivumela ngamnye kuthi ukufumana ilungelo lawyer, oko kukuthi, ukuba omnye i kstars wena ngokugqibeleleyo imibulelo ukukhangela injini exclusive ezininzi-nkqubo.
Zethu site kungasinceda ukhethe ilungelo lawyer, oko kukuthi, ukuba omnye suits ngaba eyona ngokomthetho ubuchule, ukufumaneka, ixabiso kwaye indlela lo msebenzi, ngokubanzi.
Ekuhambeni a yovavanyo ka-low magnitude, indawo proximity ye-lawyer ibalulekile ngenxa yokuba uza kuba nako ukuhlangabezana ngokulula ngakumbi kwaye awunakuba kufuneka ahlawule zothutho ebalulekileyo. Kwi-umahluko, xa-mali stakes ingaba ezibalulekileyo, iindleko kunye ukuhamba ixesha liya kuba abancinane nefuthe imirhumo.
Ke ngoko, kungcono kule imeko ukufumana a lawyer ukuba suits iimfuno zakho best, nokuba kunganjalo kude.
Ngokubhekiselele izicelo kuba luhlomle kuwo ngokusemthethweni okanye ingcebiso, njengoko umgama ingu ngaphantsi. Kule meko, kubalulekile ukuthatha lawyer oqonda yakho kunjalo, nokuba kunganjalo kude kuwe. Bonke abathengi awunayo onjalo kufuneka kuba ukufumaneka kwencwadi inxalenye yabo lawyer. Umzekelo, abanye abaxhasi umnxeba kakhulu imibuzo yabo abaqondisi-mthetho"hlala abreast", abanye ingaba uvuma nge-Imeyili kwaye silindele ukuba lawyer notifies nabo xa isiganeko kwenzeka eneenkcukacha. Ingqwalasela, iakhawunti ye-abaqondisi-mthetho iqhele kwenziwa ngomhla we-ixesha-wachitha kwindlela yakho yefayile kwaye ukuba ufaka kakhulu kakhulu yakho lawyer ubizo imibuzo, nibe yandisa ukuba imirhumo iya kwentlawulo kuwe.
Ukuba abe defended, kubalulekile ukuba ube kanti budlelwane of trust ukuze ukwazi zichaza ezahlukeneyo intricacies yakho meko.
Umzekelo, akuyomfuneko ukuba a lawyer ukuba uyayazi khusela ukuba zichaza calmly yonke imeko. Kule imeko enjalo, kungcono ukuba ukhethe kuqeshwe lawyer ukuba ufuna andazi kwaye lowo unako expose yenu yonke disputes. Amazinga lamagqwetha ingaba kunzima ukusebenza ngokupheleleyo free. Baya zahluke asingawo necessarily a kubonisa zabo izakhono entsimini ukuze osikhangelayo. Umzekelo, a lawyer ukuba kakhulu leli kwi media kuza kwenza ukuba uhlawula kuba yakhe; u; kwaye hayi necessarily zabo iinkalo zobuchule. Uninzi abaqondisi-mthetho kuba iiyure umyinge ukuze babe ke vary ngokunxulumene uhlobo lwefayile kwaye ugqityo kwetyala. I-iiyure umyinge iyaguquguquka kakhulu (phakathi kwe- kwaye isibhozo iisenti ezingama).
Nangona kunjalo, ixabiso"okuqhelekileyo"ngqo phakathi kwe- kwaye.
Luncedo a pricing eselunxwemeni yimeko ethile inqanaba ebonisa (ngokulawulwa lawyer ukuze ukwazi lungelelanisa ixesha wachitha kwindlela yakho yefayile) kodwa unako complicate i-estimation ye-litigation yi-umxhasi.
Enye indlela ukubala imali ingaba yomvuzo impahla, apho avoids unpleasant surprises.
Umzekelo, wokuqhawula umtshato ungquzulwano unako lokugqibela leminyaka kwaye ukuba ukhe esikhethiweyo inkonzo impahla, imirhumo ye-lawyer iya kuba ubukhulu omiselwe kwangaphambili. Ukuba lawyer ke iintlawulo ingaba ibalwa ngokusemthethweni kwi-impahla, kubalulekile ukuvumela kuba oku ukuba iqulathe impahla ukuphepha surprises. Isemthethweni aid ngu icebo uphunyezwe yi-Urhulumente, kwaye evumela, ngokulawulwa iimeko zokusebenza, ukuba Urhulumente babe ahlawule imirhumo yakho lawyer.
Le ndlela inokusetyenziswa kakhulu beneficial, kwaye ukuba kunokwenzeka, umele hayi hesitate ukuba uyisebenzise.
Nangona kunjalo, zonke abaqondisi-mthetho musa yamkela isemthethweni aid kwaye ngoko ke, kufanelekile ukuba undibuze lawyer ukuba lowo isamkele kuyo. Abanye abaqondisi-mthetho walile ukwamkela isemthethweni aid, ngenxa yokuba cinga ukuba schedules ezifunwa Urhulumente ingaba kakhulu elilungileyo eliphantsi kakhulu. Kulula ukutshintsha abaqondisi-mthetho ngenxa imithetho elinolwazi ukuziphatha apho kulawula budlelwane nabanye phakathi abaqondisi-mthetho yenza lula.
Ukuze bagcine cordial ubudlelwane bakhe lawyer, yindawo engcono ukuba bazise yakho lawyer ukuba ufuna ayisasebenzi ufuna ukusebenza naye, kodwa kanjalo kutheni awufuni i lula kubalulekile ukutshintsha abaqondisi-mthetho ngenxa imithetho elinolwazi ukuziphatha apho kulawula ubudlelwane phakathi phakathi ifemi ke abaqondisi-mthetho yenza lula.
Ukuze bagcine cordial ubudlelwane bakhe lawyer, yindawo engcono ukuba bazise yakho lawyer ukuba ufuna ayisasebenzi ufuna ukusebenza naye, kodwa kanjalo kutheni awufuni ukusebenza naye. Xa unayo imali yakhe imirhumo, ungaya kuba ukubonisana omtsha lawyer, yokugqibela iza zikhathalele i-zokudlulisela yakho yefayile. Kuba kuba vigilant, ngenxa kwi-inani kwakunye nemigaqo-nkqubo, iifayile ingaba sele idlule ukususela lawyer ukuba lawyer kwaye awunakuba nako"get yakho eneenkcukacha". Utshintsho ingcebiso ngu-hayi kunzima Nangona kunjalo, kuya kufuneka hayi kakubi esi sakhono ukutshintsha lamagqwetha kwaye musa incwadi olu khetho ukuba ukhe ubene kulinywa nzulu unhappy neqabane lakho lawyer. Omtsha lawyer kuya kufuneka ukuba yenza kwakhona lonke ityala, kwaye ndiya ngexesha oku kuza iziphumo ephakamileyo imirhumo. Ngoku ukuba ufuna ukwazi okungakumbi malunga indlela ukusebenza kakuhle eli khondo lobungcali-mfundo lilonke, ungakhetha ngoku ukhethe serenely phakathi zonke abaqondisi-mthetho ezidweliswe kwi-iwebsite yethu.
Njani ukubhala a wolwazi umthetho - Uncedo Afrika
Декларація Прав Людини і Громадянина 1789 року - конституційна Рада
© 2022 Abaqondisi-mthetho ka-Us-intanethi!